Umsebenzi wokuKhanya weBelt yokuhambisa, ilaphu leRubberized, iSilicone Membrane-uCayce Meyi
Ukulungiswa kwesinyithi. Abasebenzi abanamava kakhulu kwaye baxhotyisiwe
Inika uLuhlu olubanzi lweeMveliso
ukunyaniseka nokuthembela kutsala abathengi kwihlabathi liphela
I-Wuxi Cayce ngoMeyi iTeknoloji yokuThengisa i-Co, Ltd ikwindawo echumileyo yeYangtze River Delta kwiziko lejometri, ngasemva komlambo iYangtze, iTaihu ejolise kuyo. EMpuma ukuya kwiziko lezoqoqosho lase-China-i-Shanghai i-150 yeekhilomitha, entshona kwikomkhulu lakudala-i-Nanjing i-150 yeekhilomitha, emazantsi ukuya kwi-Wuxi Sunan International Airport ngama-50 eekhilomitha. I-Jinghu kunye ne-yanjiang oohola bendlela ababini abakhulu badibana kumhlaba we-jiangyin, ibhulorho yendlela i-Jiangyin Yangtze River inxibelelana nomantla kunye nomazantsi omlambo i-Yangtze, yindawo ebalulekileyo yezothutho kuMlambo i-Yangtze ezantsi. I-Wuxi Cayce ngoMeyi iTeknoloji yokuThengisa iNkampani, i-Ltd imi kwimida esempuma yepaki yoshishino.
Kutshanje Kwiindaba zeBhlog
Emva kokuhlala kushishino abicah ...
Iindlela zonyango kwindawo yesiza yokuhambisa ...